Musharraxiinta Jamhuuriga US oo dooday - BBC Somali
Musharraxiinta Jamhuuriga US oo dooday
Image caption Doodda musharraxiinta ayaa ka dhacday magaalada Las Vegas
Musharraxiinta rajeynaya in ay xisbiga Jumhuuriga ugu tartamaan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacaysa 2016-ka, ayaa qaabab kala duwan uga hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga.
Doodda ay musharraxiinta ku yeesheen magaalada Las Vegas ayaa ah tii ugu horreysan ee dhacda ka dib weerarradii uu ururkaasi ku qaaday California iyo caasimadda Paris.
Donald Trump oo ah ninka ugu cadcad musharraxiinta ayaa difaacay baaqii uu dhawaan jeediyay ee ahaa in Muslimiinta laga joojiyo soo gelitaanka Mareykanka. Waxa uu sheegay in arrintu ay tahay mid ammaan ee aanay diin khuseynin.
Barasaabkii hore ee gobolka Florida, Jeb Bush, ayaa ku tilmaamay Mr Trump musharrax fawdo ah, oo haddii la doorto noqonaya madaxweyne fawdo ah.
Senatarada kala ah Ted Cruz iyo Marco Rubio ayaa aad isugu khilaafay arrinta muhaajiriinta iyo dabagalka.
Dhammaan musharraxiinta ayaa muujiyay walaaca ay qabaan shacabka Mareykanka ee ku aaddan ammaanka dalkooda.